INTO ENDIYIFUMANAYO ENDAWENI YALEZO ZIMBI ZASEKHITSHINI EZINESONO - UHLOBO
Abanye benu basenokukhumbula esi sithuba Ndabhala, ndikubuza ukuba ngaba kufanelekile na ukuba ndiphume ndize ndifumane enye yezo mat-ekhitshini imbi-njengesono, nangona bekhubekisa amehlo am. (Ukuba awuyifundanga, ndiza kulinda ngelixa usenza!)
Ngaphandle kwengcebiso ezithandwayo zokuba ndigqobhoze kwaye ndizenze, bendisoloko ndirhuqa iinyawo kwaye ndithathe isigqibo kangangeenyanga. Kwaye ndiyavuya, eneneni. Ngenxa yokuba ndifikile nje entweni enomtsalane ngesigidi esingaphezulu komatshini oqhelekileyo wekhitshi.
(Ityala lemifanekiso: UNomad omncinci )
Jonga nje ezi ziNdawo zokuDlala simahla kwiMats UNomad omncinci ! Ngokobuchwephesha obenzelwe amagumbi okudlala abantwana, ziinguqulelo ezintle zala maqhekeza amagwebu agqithisileyo ahlala eza ngemibala ephambili. Ezi matethi zinikezelwa ngemibala emihle kunye noyilo olubukeka ngakumbi njengeerugs ezibizayo kunamathe anganyangekiyo ngamanzi.
Nangona zidibana ngokudibeneyo njengeziqwenga zepuzzle, ziza ngobukhulu obahlukeneyo obahlukeneyo. Obona bukhulu buncinci- isine-ngesithandathu-inezinto ezintandathu, iinyawo ezimbini, iinyawo ezimbini kunye ne-12 edging bonders, endinika ngaphezulu kweethayile ezaneleyo zokuhambisa ikhitshi lam elincinci lokuhamba kunye nezinye izinto ezongezelelekileyo xa kunokwenzeka Kuya kufuneka bonakale (nangona bekungafanelekanga kuba unokuzicoca ngesepha, ngamanzi, kunye nesiponji esikhuhlayo!).
Thenga: Zulazula Simahla , ukusuka kwi- $ 119 kwi-Little Nomad
Andiyithandi le pinki (ibizwa ngokuba yiRuby Slipper) kuba ndihlala ndibona ezinye iikhitshi (ezinje! Le !) ngeerugs ezipinki kwaye ngoku ndiyathengiswa. Kwaye andiyithandi kwaphela ipinki! Ayithengiswanga njengam? Ubusuku obuneenkwenkwezi okanye Ngorhatya ingabonakala intle, nayo.
Ndiyazi ukuba ezi zinto azenzelwanga ngokukodwa ukunceda ukunciphisa iintlungu zomqolo ngelixa ndimi esinkini - njengemethi yokudinwa ekhitshini- kodwa kuye kwafuneka ndicinge ukuba ukusetyenziswa kwam kwelebheli engekho kumatshini oshushu kuya kuba ngcono kunento okanye nditsho ityali encinci.
Ingaba ucinga ntoni? Ungazibeka ezi tile ekhitshini lakho?
Esi sithuba ekuqaleni sasisebenza eKitchn. Yibone apho: Into endiyifumanayo endaweni yalezo zimbi zasekhitshini ezinesono .
ULisa Freedman nguMlawuli weNdlela yokuPhila eThe Kitchn. Akazange adibane netshizi okanye iteyiphu ye-washi angayithandiyo. Uhlala kwilizwe laseNew York nomyeni wakhe kunye nomntwana wabo, uMillie.
IGuggenheim yiFrank Lloyd Wright yakutshanje ye-LEGO Set
Eli qhinga leShelving eliSebenzayo liya kubumbela kwiLayibrari eyakhelweyo ngaphakathi Jonga kwigumbi lakho lokuhlala
Uyenza njani iKhaya ukuba Bonke Abahlobo Bakho baFune ukuHlala kuyo
Intsingiselo ye11 11
yintoni u-10 ^ 10
Uthando lwenombolo ye-747
zithetha ukuthini 444
I-911 ithetha inani leengelosi